‭ Magrudy.com - All in the family: Reader 2: Gr 1: Reader ‬
All in the family: Reader 2: Gr 1: Reader
Uthotho lwezifundo zakwa-ACE lukuzisela indlela egqibeleleyo yokuthethwa kolwimi, ukulufunda, ukulubhala ukukukrobisa kwindlela kwindlela efanelekileyo emalusetyenziswe ngayo. Xa sele ukwazi ukusebenzisa oluthotho lobugcisa bezifundo zakwa-ACE luzakukunika uhlobo weenkqubo ezimbini zokufunda kunceda abafundisi-ntsapho nabafundi kuhlolo, oluzinze kumxholo weenkqubo ezimbini zokufunda (nangona inkqubo yokufunda nokubhala kunye nobugcisa zingcisa zingasetyenziswa ngokwahlukeneyo). Oku kukuvuselela, oluthotho lwezifundo ze-ACE Le yindlela yokuvuselela umgaqo-nkqubo wezifundo olungele lamaxesha. Kuquka neminye imiboniso emitsha. Ukanti eyona njongo iphambili.kukufikelela kubafundi, beelwimi, zabantu abantsundu, bo Mzantsi Afrika.